ô.cc – Imba
URL pfupiener isingazivikanwe
. 1 awa1 zuva1 vhiki1 mwedzi1 gore
Yakavakirwa vanhu nevanhu
. Dereferrer zvinongedzo zvako zviri nyore, zvibatanidze kune yako yega App. Hapana zvitambi, hapana matanda. Kuvanzika kwako kwakachengeteka.
Nei ndichifanira kusheedzera uye kupfupisa URL yangu?
ô.cc inowedzera yako kuvanzika uchishandisa isina chinhu chinorehwa (dereferer) kune zvese zvinongedzo zvaunopa. Uyezve, ichapfupisa mafaipi ako, zvichiita kuti zvive nyore kugovana pama media enhau uye chero imwe nzvimbo yekugovana. Iwe unokwanisa kugadzirisa yako mwenyewe url uye kududza nguva yekubuda. Nekuti inongochengetedza maratidziro aunoda kutenderedza, inobvumira iwe kupfupisa urls yemahara.
Chii chinonzi dereferer?
A dereferer inzira yekudzosera mushandisi kune yakasarudzika URL kubva pane peji rewebhu. Kazhinji, vashandisi vewebhu vanotumira ruzivo (kusanganisira Referer) iwe uchidzorerwa kune rimwe peji. Basa revateresi kuvanza / kubvisa ruzivo irwo kune webhusaiti yakabatanidzwa. Kana webmaster achida kuongorora mitengo yewebsite yake, inoratidza URL yeiye aratidziri pane iyo yekutanga URL.
1. Namatira kana nyora yako URL mune yekudira.
2. Isa zita retsika (sarudza).
3. Isa zuva rekupera kubuda (sarudza).
4. Dzvanya kupfupisa.
Iwe unobva watora URL itsva iyo iwe yaunogona kugovana uye kushandisa!
Ungabatanidza sei kune yangu application?
Ingoshandisa url https: //ô.cc/? uye wedzera yako yepakutanga url kwairi.
Nzira yekupfupisa ma URL anonyanya kukurumidza?
Iwe unogona kupfupisa uye kusazivisa yako URL chaizvo nekukurumidza uye zviri nyore nyore.
- Iwe unowedzera bhukumaki rinotevera mune raunoda.
- Enda kune webhusaiti iwe yaunoda kufupisa
- Dzvanya pane iyo ô.cc yaunofarira iwe yaunogadzira
Dhonza uye uchidonhedzera bookmarklet redu mubhavhu rako rekushandisa kuti riite odhita ipfupi urch apa uchifamba nekurira mbeva yekukanya.
Nei uchifanira kupfupisa uye kusazivisa link dzako?
Izwi rekuti URL kupfupisa rakatikomberedza kwenguva yakareba ikozvino. Tinogona kutotadza kuziva kuvapo. Asi inenge iri pese pese internet. Chikonzero chekutanga chekupfupisa mawebhusayithi ndechekuti zviri nyore kuyeuka kune vanhu vangave vachitsvaga iyo webhusaiti pamusoro pewebhu. Ngatiti iwe uine chinongedzo chewebsite yako kana chinongedzo chakanangana nezvakawoneka zvewebsite yako mu URL yeiyo yakakura uye zvakare hazvigone kutaurwa nekutaura.
Ngatiti https://example.com/5dc1apgeniune iwe unogona kunge wakamboona rudzi rwakadai rwe URL paunenge uri kuwana chinongedzo chakapetwa pamusoro pe clipboard yechigadzirwa chako. Unogona kutoona kuti haugone kuudza chinongedzo pane yakasarudzika meseji kuna ani nani.
Izvo zviri kukudzivirira kubva kune yekutanga nhanho yekushambadzira pane pachena yerudzi rwechibatanidza. Uye icho chaicho chikonzero changu chakakosha che URL chipfupi chaunogona kuwana kugona kwekuva nemazwi ane ushamwari uye zvakare nyore kuverenga chinyorwa icho iwe unogona nyore kunyora uye nyore kugovera. Yunifomu sosi locator inozivikanwawo sekuti URL ndeyenzvimbo yekuenda kune imwe yakagadziriswa pamusoro wepasi rese rewebhu.
Maitiro eURU kupfupisa anoshanda nenzira yekuti inokwanisa kudzikisa huwandu hwevabati mune yekubatanidza asi ichiri kugona kutungamira vashandisi kuenda kune izvo chaizvo izvo zvemukati.
Paunenge uchiwana yakakura URL pamberi pako zvakanyatsoomera kuti iwe urangarire chikamu chose. Muchiitiko ichi URL inopfupisa inoita basa rako kuti udzorere mavara mu URL asi zvakadaro ichiri kuigonesa kuendesa iwe kune izvo zvakafanana zvirimo.
Nekuita izvi iwe uchave nekunakisa kugadzirwa kweiyo URL pamberi pako iyo ichave iri nyore kuyeuka uye nyore kuteedzera uye kugovana. Kumusoro kwe URL kupfupikisa kunewo kugona kwekubatanidza mawebhusaiti mashoma kana mashoma mapeji ewebhu mune imwechete URL.
Chikonzero chikuru chekupfupisa URL ndechekuti inotaridzika zvakanaka uye zvakare zvakareruka uye pasina mhando yekukanganisa inogona kugona kugovera kuburikidza neakananga kutumira mameseji. Iyo ine zvakare nezvimwe zvezvakanaka zvekuchengetedza kwekuchengetedza nzvimbo uye iyo data uye zvakare kuitisa iyo mhuka kune chero chero mhando yekukuvara inowanikwa. URL kupfupisa zvakare zvinoita kuti zvive nyore kugadzira yekutsvaga injini optimization hushamwari zviri pamusoro pewebhu.
Ngatiti iwe une webhusaiti webhusaiti iwe urikugadzira kushambadzira kwemasevhisi akasiyana kwauri kuenda kunogovana zvakasiyana. Iine URL pfupi iyo unogona kupa zvipfupi uye shanduro ye URL uye wobva waiwedzera pamusoro pemazwi akakosha kuitira kuti vanhu vakwanise kugona kuwana zviri mukati uye zvakare zvinogona nyore kuverengerwa pamusoro peGoogle analytics.
Sezvo zvinoita kuti zvive nyore kuti zvinongedzo zvigove zvichishandiswa vashandisi zviri nyore kugona kudhonza pamwe nekuperetera uye zvakare kuvayeuka zviri nyore. Iko kushumirwa kwe URL kupfupisa kunobatsirawo nekuvimba kwevatengi vewebsite yako. Chikonzero chikuru ndechekuti kuburikidza neURU kupfupisa iwe unowana kuve ne kuverenga zvine hushamwari URL iyo iri kuenda chaizvo zvakanaka pamwe neyakaverengeka bvunzo yezvinyorwa online. Uye kana zviri zvemafuratera kana zvinyorwa iwe unogonawo kuwana mukana wekuwana chinongedzo chako seyakachena sezvazvinogona kuitira kuti igoonekwa yakawanda seyakavimbika sezvayingave ichiita kune vanogona kuve vatengi.
Iyo isingazivikanwe URL kupfupikisa
Rudzi urwu rwe URL ndirwo rwawakamboshandisa kupa sevhisi yekubvunzisisa webhusaiti yako pasina kuteedzera zvakanyatso tsanangurwa kana ruzivo rwe munhu ari kutora ongororo. Mhando yakadaro yehyperlink inogona kudhonzwa nyore nyore mumaemail kana kunyange pa pop-up hwindo rewebsite yako kana kunyange pane yekubata peji. Kushandisa URL isingazivikanwe kunobatsira iye muridzi webhusaiti kupa nekuchengetedza uye kuvanzika kushamwaridzana kushamwaridzana kwewebsite kuitira kuti vashandisi vanogona kutora ongororo yezviri mukati uye zvakare nyore kuona mhando hwese hwewebhu.
Uye iyo inobatsira kubva kune chero mhando yezvakawanda zvakakuvadza zvirimo internet. Senge kana iwe uchifongoresa mune yese yakabatana newebhusaiti yako kuenda kune chero rudzi rwekutsigira zviripo saka zvinogona kuitika kuti zvemukati uye chaicho nzvimbo yezvako zvemukati wepasi rese rewebhu zvinogona kuteverwa zviri nyore uye zvakare zvinogona kutungamirirwa mazwi anokuvadza zviito. Ipo kune rumwe rutivi nekushandisa isingazivikanwe uye pfupi uye shanduro yeiyo URL chaiyo iri kuenda kukupa iyo yekuwedzera chikamu chekuvanzika uye zvakare zvinokubatsira iwe kuchengetedza zvinyorwa zvako zvakanyanya.
Izvo zvakanakira kune vanhu avo vari kuda kuisa uye URL kutangidza zvirevo zvekusimudzira. Kune akati wandei URL kupfupisa masevhisi pane internet iyo inokwanisa kuita yako URL isingazivikanwe uye zvakare kuverenga kuve neushamwari.
Nzira dze URL yekupfupisa zvinoteedzera nzira ye http kuendesa zvekare. Izvi zvinogona kushandiswa kupfupisa uye kuita isingazivikanwe yewebhu link kana kunyange IP kero. Iyi nzira inogona kupfupika nekudzika uye kutsiva mamwe mavara eiyo yakareba URL uye anokwanisa kuitisa ipfupi uye shanduro inozochengetedza iyo chaiyo nzvimbo yenzvimbo yepasi rese rewebhu.
© 2022 ô.cc • All Rights ReservedKubataYakavanzika mutemo